प्रधानमन्त्री ओलीलाई देउवाको फोन : वरिष्ठ नेता पौडेल रिहा |प्रधानमन्त्री ओलीलाई देउवाको फोन : वरिष्ठ नेता पौडेल रिहा – हिपमत
नेपाली काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल रिहा भएका छन् । निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेको भन्दै आज दिउँसो पक्राउ गरिएका नेता पौडेललाई साझ रिहा गरिएको हो । पौडेलसँगै पक्राउ परेका काँग्रेस तनहुँका कार्यवाहक सभापति जीतप्रकाश आलेलाई पनि रिहा गरिएको छ ।
व्यास नगरपालिकाका दुई वडा जोड्ने पुलको उद्घाटनका लागि पुगेका पौडेललाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । रिहापछि नेता पौडेलले अधिनायकवादी चरित्र देखाउँदै आफूलाई पक्राउ गरिएको बताए । उनले सरकारले शक्ति दुरूपयोग गरेको आरोप लगाएका थिए । पौडेलले बिहीबार बिहान पुल उद्घाटन गरिने जानकारी गराए ।
आफ्नो पालामा निर्माण भएको पुल उद्घाटन गर्न स्थानीय सरकार र पुल निर्माण समितिले आफूलाई बोलाएकाले गएकोमा सरकारले सुरक्षा दिनुको सट्टा उल्टो अधिनायकवादी चरित्र देखाएको पौडेलको भनाइ थियो ।
‘यसबाट ओली सरकार लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छैन भने देखिएको छ । राजनीतिक गतिविधिलाई निषेध गर्न खोज्नुले अन्तत: लोकतन्त्रलाई नै आघात पुर्‍याउँछ । सरकारको यो कृत्यको विरोध हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्र अपमानित छ । आज जे भइरहेको छ । यसको देशभर विरोध भइरहेको छ ।’
काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि भएको धरपकडलाई लिएर प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेका थिए । देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरी नेता पौडेललाई किन पक्राउ गरेको भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाका अनुसार सभापति देउवाले वरिष्ठ नेता पौडेललाई तत्काल रिहा गर्नसमेत माग गरेका थिए । नेता पौडेलकै शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरीले सुरक्षित स्थलमा लगेको तर्क गर्दै तत्काल रिहाइ गरिन्छ प्रधानमन्त्रीको जवाफ थियो ।
कांग्रेसलाई योगेशको प्रश्न : के को चुनाव हुन्छ र जित्‍नुहुन्छ ?
ओलीको टाउकोमै हान्नुपर्ने स्थिति आयो :- प्रचण्ड
ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई ‘धुलोछाप’को संज्ञा :- माधव नेपाल
थप आन्दोलन कार्यक्रम गर्ने घोषणा :- प्रचण्ड-नेपाल पक्ष
देउवामाथि दबाब बढाउन पौडेल समूहले बोलायो बैठक
पर्सि सचिवहरुको हेरफेर, गृह र निर्वाचन कसले हाँक्ने ?
प्रदेश १ मा झन्डै ११ लाख नागरिकको स्वास्थ्य बिमा
मोरङ चेम्वर अफ कमर्श विराटनगरद्वारा विद्यार्थीहरुलाई न्यानो कपडा वितरण